» उत्कृष्ट ७ मा कसले मार्ला बाजी ?
उत्कृष्ट ७ मा कसले मार्ला बाजी ?
१० पुष २०७७, शुक्रबार १९:५५
मकवानपुर, १० पुस । नेपालको आफ्नै सिंगिङ रियालिटी शो ‘ वाईवाई नेपाल स्टार’ मा उत्कृष्ट ८ प्रतियोगीहरु छनौट भइसकेका छन् । उत्कृष्ट ८ मा पुगेसँगै शोले थप तहल्का मच्चाउन थालेको छ । उत्कृष्ट ८ छनौटका क्रममा नेपाल स्टारका उत्कृष्ट ९ मा परेका प्रतियोगीहरुले तहल्का मच्चाउने प्रस्तुति दिएका थिए । ती प्रतियोगीहरुमध्ये लगभग सबै प्रतियोगीहरुले निर्णायकहरुबाट स्टाण्डिङ ओभिएसन पाएका थिए । कडा प्रतिस्पर्धाका बिचमा छानिएका उत्कृष्ट ८ प्रतियोगीहरुमध्ये यो साता कुन कुन प्रतियोगीहरु उत्कृष्ट ७ मा पर्लान् भन्ने विषयमा दर्शकहरुको चासो छ । उत्कृष्ट ८ मध्ये अवार्डका आधारमा विशालदेव श्रेष्ठ र सन्देश बम्जन लामा उत्कृष्ट ७ मा पर्ने सम्भावना ठूलो छ त्यस्तै उत्कृष्ट ८ मा पुगेका अन्य चर्चित प्रतियोगीहरु सुरेश लामा, लक्ष्मण लिम्बु, सिद्धान्त खड्का, अमिन परियार, एलिना गुरुङ र समिक्षा दाहालले कडा चुनौति दिने पक्का छ । उनीहरु सबै उत्कृष्ट ७ का बलियो दाबेदार हुन् । यस्तो अबस्थामा कुन प्रतियोगीले उत्कृष्ट ७ का लागि बाजी मार्लान् भन्न सकिने अवस्था छैन । तपाईको विचारमा यी प्रतियोगीहरुमध्ये कुन प्रतियोगीहरुले उत्कृष्ट ७ का लागि बाजी मार्लान् ? कृपया कमेन्ट गर्नुहोस् । हेर्नुहोस् भिडियो–
उत्कृष्ट ८ मा पुगेकाहरुमध्ये सुरेश लामा पनि सर्वाधिक चर्चामा छन् । काठमाडौँ अडिसनबाट छानिएका सुरेशले विभिन्न राउण्डहरुमा निर्णायकहरुको स्टाण्डिङ ओभिएसन प्राप्त गरेका छन् । उनले उत्कृष्ट ८ छनौटका क्रममा पनि निर्णायकहरुको प्रशंसाका साथमा स्टाण्डिङ ओभिएसन पाएका थिए । २८ वर्षीय सुरेशले यस अघिकै केही राउण्डमा गाएको गीतलाई पनि निर्णायकहरुले एपिसोडकै बेस्ट प्रस्तुति भनेका थिए । उत्कृष्ट ७ कै लागि भिडिरेहका लक्ष्मण लिम्बुले काठमाडौँ अडिसनबाट अगाडि बढ्दै विभिन्न राउण्डहरुमा निर्णायकहरुको स्टाण्डिङ ओभिएसन पाईरहेका छन् । विभिन्न राउण्डहरुमा तहल्का मच्चाएका उनले उत्कृष्ट ८ छनौटका क्रममा पनि तहल्का मच्चाएका थिए । उनलाई निर्णायकहरु सबैले स्टाण्डिङ ओभिएसन दिएका थिए । हरेक जेनरको गीतलाई न्याय गर्ने गरेको भन्दै उनलाई निर्णायकहरुले रकस्टारको संज्ञा दिएका थिए ।
त्यस्तै नेपाल स्टारको उत्कृष्ट ८ मा पर्न सफल सिद्धान्त खड्का उत्कृष्ट ७ मा पुग्नसक्ने अर्का बलिया प्रतिस्पर्धी हुन् । ईटहरी अडिसनबाट छानिएका सिद्धान्तले हरेक प्रस्तुतिहरुमा निर्णायकहरुको ताली पाएका छन् । उत्कृष्ट ८ को प्रस्तुतिका क्रममा उनले रकिङ प्रस्तुति दिएर विशेष अतिथि सहित सबै निर्णायकहरुलाई उठेर स्टाण्डिङ ओभिएसन दिन बाध्य बनाएका थिए । उनको प्रस्तुति यति दमदार भयो कि निर्णायकहरु स्पिचलेस भएका थिए । उनको प्रस्तुतिले निर्णायकहरुको हृदय नै हल्लाईदिएको भन्दै निर्णायकहरुले उनको प्रस्तुतिलाई माईन्ड ब्लोईङ भएको बताएका थिए । सिद्धान्तले कुनै पनि प्रस्तुतिमा निर्णायकहरुलाई निराश नबनाएको पनि निर्णायकहरुले बताएका छन् । नेपाल स्टारको उत्कृष्ट ८ मा पुगेका विशाल देव श्रेष्ठ पनि उत्कृष्ट ७ को बलियो उम्मेदवारका रुपमा देखिएका छन् । विशालले उत्कृष्ट १० को प्रस्तुतिका क्रममा एक्स्पर्ट अफ द डे अवार्ड पनि जितेका थिए । ईटहरी अडिसनबाट छानिएका विशालले निर्णायकहरुको मन जित्दै अगाडि बढेका छन् ।
त्यस्तै नेपाल स्टारको उत्कृष्ट ८ मा पर्न सफल सन्देश बम्जन लामाले पनि आफुलाई उत्कृष्ट ७ को बलियो हकदारका रुपमा प्रस्तुत गरिसकेका छन् । सन्देशले उत्कृष्ट ८ को छनौटका क्रममा सबै निर्णायकहरुलाई नचाएका थिए । उनीहरुले उठेर सन्देशको प्रस्तुतिको तारिफ गरेका थिए । उनले उत्कृष्ट ८ छनौटकै क्रममा एक्स्पर्ट अफ द डे अवार्ड जितेका थिए । नेपाल स्टारको उत्कृष्ट ८ मा पर्न सफल अमिन परियार अचम्म लाग्दा प्रतियोगी हुन् जसले पुराना गीतहरुलाई पनि प्राण भरेर गाउन सक्छन् । पोखरा अडिसनबाट छानिएका अमिनले विभिन्न राउण्डहरुमा निर्णायकहरुको प्रशंसा र ताली पाउँदै आएका छन् । उनले फरक फरक प्रस्तुतिहरु दिएर निर्णायकहरुको मन जितेका छन् । उत्कृष्ट ८ को प्रस्तुतिका क्रममा पनि रकिङ प्रस्तुति दिँदै उनले सबै निर्णायकहरुलाई उठ्न बाध्य बनाएका थिए । निर्णायक रामकृष्ण ढकाल र विशेष अतिथि सनुप पौडेलले उनलाई स्टेजमै गएर प्रशंसा गरेका थिए । उनको प्रस्तुतिलाई आगो लगाउने प्रस्तुति भनेका थिए । उनलाई निर्णायकहरुले नेपाली माईकल ज्याक्सनको उपनाम पनि दिएका छन् ।
त्यस्तै नेपाल स्टारको उत्कृष्ट ८ मा पुगेकी एलिना गुरुङले उत्कृष्ट ८ छनौटको क्रममा निर्णायकहरुले मन जितेकी थिईन् । उनको प्रस्तुतिलाई हालसम्मकै सबैभन्दा उत्कृष्ट भएको पनि निर्णायकहरुले बताएका थिए । उनले पनि आफुलाई उत्कृष्ट ७ मा पुग्नसक्ने बलियो प्रतियोगीका रुपमा प्रस्तुत गरेकी छिन् । नेपाल स्टारको उत्कृष्ट ८ मा पुगेकी समिक्षा दाहाल, नेपाल स्टारको स्टेजमा रकस्टारका रुपमा चिनिएकी छिन् । काठमाडौँ अडिसनबाट छानिएकी समिक्षाको प्रस्तुतिमा सबै निर्णायकहरुले स्टाण्डिङ ओभिएसन दिएका थिए । उनको प्रस्तुतिको प्रशंसा गर्दै निर्णायकहरुले उनलाई फायर पर्फोमेन्सरका रुपमा चर्चा गरेका थिए । निर्णायक आलोक श्रीले उनलाई स्टेजमै गएर प्रशंसा गरेका थिए । उनी उत्कृष्ट ७ मा पुग्ने बलियो सम्भावना भएकी प्रतियोगी हुन् ।